Nagarik Shukrabar - ममता नवौं मिस पोखरा
बुधबार, ०२ साउन २०७५, ०६ : १३
ममता नवौं मिस पोखरा
आइतबार, २२ असोज २०७४, ०९ : १३ | शुक्रवार
नागरिक पश्चिमेलीको प्रस्तुति मेट्स इन्टरनेशनल ‘मिस पोखरा २०१७’ को ताज पोखरा सृजनाचोककी २० वर्षीया ममता जोशीको शिरमा परेको छ । १५ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनले उपाधिको ताज आफ्नो पोल्टामा पारिन् । नर्सिङ पेसामा आबद्ध ममताले चाँदीको ताजसँगै यामाहाको फेसिनो स्कुटर र पचास हजार रुपैयाँका साथै अन्य पुरस्कारहरु पाइन् ।
उपाधिसँगै ममताले ‘मिस इन्टेलेक्चुअल’ टाइटल अवार्डसमेत उम्कन दिइनन् । ‘मेरो लक्ष्य प्राप्तिको लागि एकदमै तम्तयार थिएँ,’ क्राउन पहिरिएपछि उनले भनिन् ‘कडा मिहिनेतको परिणाम अन्ततः मैले पाएकी छु ।’ प्रतियोगितामा २३ वर्षीया पुनम के.सी. फस्ट रनरअप भइन् । उनले तीस हजार रुपैयाँ र अन्य आकर्षक पुरस्कारहरु पाइन् । पोखरा सिमलचौर की १७ वर्षीया सिम्रन गुरुङले सेकेन्ड रनरअपसँगै मिस भ्युअर्स च्वाइस र मिस क्याट वाक टाइटल जितिन् । सेकेन्ड रनरअप सिम्रनले २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।
१६ प्रतिस्पर्धीहरुबाट दोस्रो चरणमा उत्कृष्ट १० जना, तेस्रो चरणमा उत्कृष्ट ५ जना छनौट गरिएकोमा फाइनल राउन्डमा मुख्य निर्णायकले सोधेको एउटै प्रश्नको उत्तर लेखेर वाचन गरेपछि अन्तिम निर्णय आएको थियो । उपाधि प्राप्त गर्न प्रतियोगिहरुलाई लेखन र वक्तृत्वकला प्रस्तुत गर्न लगाइएको थियो । पोखरा जेसिसको आयोजनामा भएको मिस पोखरा २०१७ मा अन्य विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सब टाइटल उपाधि दिइएको थियो । जसमा मिस ट्यालेन्ट सञ्चिता घिमिरे, मिस फोटो जेनिक र मिस पपुलारिटी सजनी बानिया, मिस बेस्ट स्माइल श्रृष्टि गुरुङ, मिस बेस्ट ड्रेस बन्दना के.सी., मिस बेस्ट पर्सनालिटी अर्पना सापकोटा र मिस बेस्ट हेयर शशि थापामगरले हात पारे ।
मिस नेपाल २००० एवं भिजे उषा खड्की र सञ्चारकर्मी सुरज थापाको कोरियोग्राफीमा सम्पन्न मिस पोखरा २०१७ को ग्रान्ड फिनालेको निर्णायकहरुमा प्रमुख निर्णायक डा. एलियमा जोन, डा. चैतन्य अधिकारी, उदय भट्टराई, सन्तोष पोख्रेल, नारायण शर्मा आदि रहेका थिए ।